माओवादीलाई अब सिध्याउन सकिन्छ कि ? भनेर कसैले सोचेको हो भने अर्को माओवादी जन्मिन्छ प्रचण्ड , – Ranga Darpan
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Feb 8, 2019
माघ २५ , काठमान्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले लेखेको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
देशमा शान्ति प्रक्रिया विपरित काम भईरहेको बेला दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन : न्यायिक समिति, कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तकको शुक्रबार विमोचन गर्दै प्रचण्डले भने,। ‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीत र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ व्यवस्था गरेको छ,।
त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन थालेको छ ? विस्तारै कमजोर त पारिँदै छैन ?’‘हामीले पुरानो संस्कृति पुरानो संरचना, पुरानो कार्यशैली र भ्रष्टाचारको पुरानै रोगलाई निधान गर्ने परिकल्पना गरेका थियौं’।
, प्रचण्डले भने, ‘तर, फेरि उस्तै जतासुकै भयो भने हामीले नगरे पनि हामी जहाँ छौँ त्यही उभिदा उभिदै देशमा, मधेसमा एउटा ढंगले र पहाडमा अर्को ढंगको विकराल स्थिति सिर्जना हुनसक्छ।अब सिर्जना हुने विकराल स्थितिलाई फेरि १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाजस्तै गरी सहज निकास दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले हिजो लडाईं, आन्दोलनमा सहभागी हुने र शान्ति प्रक्रियामा खुशीयाली मनाउनेले निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने बेला आएकोप्रति आपत्ति जनाए। सँगै उनले माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले सोचेको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए। ‘
विस्तारैविस्तारै माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ’, प्रचण्डले भने’, ‘अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ। पुरानै संरचना र कार्यशैलीतिर फर्किने प्रयासले मधेस र पहाडमा विकरात स्थिति सिर्जना हुन सक्ने प्रचण्डको चेतावनी छ ।